Madaxweynaha Ruuska Oo Ku Gacansaydhay Xabad Joojin Uu Turkigu Codsaday – somalilandtoday.com
Madaxweynaha Ruuska Oo Ku Gacansaydhay Xabad Joojin Uu Turkigu Codsaday
(SLT-Moscow)-Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku gacan seyray xabad joojinta uu Turkiga codsaday si looga hortago in uu dhiig ku daato waqooyiga Suuriya.
Shirka saddex geesodka ahaa ee maanta dhacay ayuu Mr Putin ka sheegay in Ruushka uu sii wadi doono dagaalka uu kula argagixiada ku sugan gobolka Idlib.
Idlib ayaa ah goobta kaliya ee ku soo hartaya gacanta kooxaha mucaaradka, waxana ku nool dad gaaraya ku dhowaad Saddex milyan oo qof.
Ciidamada milatariga Suuriya oo ay taageeraan Ruushka iyo Iiraan ayaa isu diyaarinaya in goordhow ay dagaal xooggan ku qaadaan gobolkaasi.
Shirkaan saddex geesoodka ah ee ka dhacay magaalada Tehran ayaa loo arkayay in uu yahay fursaddii ugu dambeeysay ee lagu joojin lahaa dagaal ka dhaco gobolka Idlib.
Suuriya ayaa la daalaa-dhacaysay dagaal sokeeye tan iyo sandkii 2011-kii,kadib markii ay biloowdeen mucaarad iyo dibadbaxyo oo aan khalalaase wadan oo looga soo horjeeday madaxweyne Bashar al-Assad, kuwaasi oo markii dambe isku bedelay dagaal ay ku dhinteen in kabadan 350-kun oo qof.
Maxay tahay sababta ay Iiraan,Ruushka iyo Turkiga ay door weyn uga qaateen dagaalka Suuriya?
Turkiga- waxa uu muddo dheer taageera siinayay kooxaha mucaardka sababtoo ah waxa uu ka cabsanayaa in qaxooti badan oo kale ay ku soo qaxaan soohdimihiisa.
Madaxweynaha Turkiga ayaa dhigiisa Iiraan iyo Ruushka u sheegay in aysan doonayn in gobolka Idlib uu isku bedelo goob dhiigga lagu daadiyo.
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionQalabka la isaga difaaco sunta kiimikada ayaa la geeyay gobolka Idlib
Haseyeeshee, Ruushka iyo Iiraan ayaa xulafa la ah madaxweynaha Suuriyaa Bashar al-Assad, waxa ayna sheegeen in ay khasab tahay in kooxaha jihaad doonka ah ee ku sugan Idlip gabi ahaanba laga sifeeyo gobolka.
Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo kumanaan dagaalyan oo Iiraaniyiin ah ayaa milatariga Suuriya ka caawiya weerarada ay ku qaadaan goobaha ay ka taliyaan mucaaradka.
Muxuu aad muhiim ugu yahay gobolka Idlib?
Waa gobolkii ugu dambeeyay ee ay ka taliyaan ururada mucaaradka iyo kuwa jihaad doonka ah, kuwaasi oo isku dayayay in meesha ay ka tuuraan Mr Assad toddobadii sano ee la soo dhaafay.
Waxa uu gobolka isku xiraa waddooyinka waaweyn ee mara waddanka Suuriya marka haddii dib looga qabsado mucaaradka waxa ay ku tahay dhabar jab weyn sabatoo waxa ay ku sooo harayaan goobo yar-yar oo kala fog.
Waxaa la aaminsanyahay in ilaa 30,000 oo isugu jira mucaardka iyo kooxaha jihad doonka ay ku sugan yihiin gobolka Idlib, balse dadka badankoodu waa shacab.
Qaramada midobay ayaa sheegeysa in gobolka ay ku noolyihiin ilaa 2.9 milyan oo shacab ah oo ay ka mid yihiin milyan caruur ah.
In ka badan nus malyuun qof ayaa ka barakacay guryohooda.